Jacayl gaboobey iyo jir la gaday – Kaasho Maanka
Jacayl gaboobey iyo jir la gaday
Ciddi-shabeel waxa uu joogaa magaalada Gaalkacyo ee ku taal bartamaha Soomaaliya. Sar siddeed dabaq ah buu dabaqa ugu hooseeya waxa uu baalrogayaa buug sawirro dumar ah. Sarta uu dabaqa ugu hooseeya joogo afar dabaq oo ka mid ahi waxa ay ku kiraysan yihiin shirkad weyn oo ka ganacsata jirka dumarka.
Waxa uu Ciddishabeel jiraa toddobaatan iyo dhawr sano, weligiisna ma uu guursan. Meelaha ay joogaan durmarka jirkooda gata aad buu u booqdaa, laakiin maanta waxa uusan weligiis dareemin buu dareemay. Buug ay ka buuxaan sawirro dumar buu rogrogey, waxa uuna isha la sii raacay gabar ay timeheedu khad ka madow yihiin sawirkeed. Weligiis wax ma uu jeclaan, laakiin maanta sawirkaas ayaa wadnihiisa ugu dhacay sidii gantaal sun ah. Haweeney xafiiska joogtey oo awal buugga u dhiibtey baa aragtay in uu sawirkaas ku dhaygagay, waxa ayna tiri; “Malaha qoftaas ayaa ku cajabisey!”. Ciddishabeel waxa uu dareemay tabardarro uusan naftiisa maamuli karin iyo in uusan ka jeesan karin sawirkii gabadha, waxa uuna haweeneydii xafiiska ugu jawaabey; “Haa, ee xaggee bay joogtaa?”.
Haweeneydii intii aysan sheegin dabaqa ay gabadha uu jirkeeda gadanayaa joogto ayey sheegtay qiimaha lacageed ee laga rabo Ciddishabeel. Miis dheer oo uu buugga sawirradu saarnaa baa u dhexeeyey haweeneyda iyo Ciddishabeel, waxa uuna iska dhigay buuggii, ka dibna jeebka surweelka ayuu lacag ka soo saaray. Maskaxdiisu waxa ay la gariiraysey jacayl uu u qabo gabadhii uu sawirkeeda arkay, gacantii uu lacagta ku dhiibeyna ma ay degganeyn oo lalleemo ayaa ku jirtey. Haweeneydii waxa ay u soo celisey baaqi, waxa ayna tiri; “Dabaqa saddexaad qolka saddex boqol iyo toban”.
Jacayl dartiis in uu hunqaaco ayuu u dhawaa, waxa uuna raacay wiishkii oo uu taabtay dabaqa saddexaad. Waxa uu illaawey lanbarkii qolka ay joogtey gabadha uu jeclaaday, dib ayuuna xafiiskii hoose ugu soo laabtay. Mar labaad bay haweeneydii u tilmaantay qolka saddex boqol iyo toban.
Qolkii buu garaacay, waxaana ka furtay gabadhii uu sawirkeeda jeclaaday oo hadal macaan ku soo dhaweysey, gacanna u soo taagtey. Waxa uu gacanqaaday isaga oo xooggii laga siibey oo meyd aan waxba dhaamin. Waxa uu sidii qof garaab ah oo xanuun darani hayo isku tuuray kursi. Qolka waxaa yaal kursigaas uu isku tuuray, miis yar iyo sariir in gabadha lagu la xaalo loo asteeyey.
Gabadhii aragtay in Ciddishabeel uu jirran yahay. Afkiisa oraahi iyo erey ka ma soo bixi karin. Gabadha indhaha u ma uu dhammayn karin. Xoog ma uu hayn oo meyd oo kale ayuu ahaa. Gabadhu waxa ay markii hore damacday in ay taataabato si uu wax u dareemo, laakiin markii ay aragtay in uu meyd oo kale yahay bay iska daysey.
Ciddishabeel markii uu kursigii qolka gabadha ka kici kari waayey baa waxaa qolkii soo galay labo nin oo xoogag waaweyn oo garbaha qabtay ilaa uu istaagey. Waxa uu damcay in uu ka cabbo tuubbo qolka illinkiisa ahayd, laakiin wadnihii baa biyihii ka hor yimid. Isaga oo luudaya ayuu wiishkii hoos u raacay, waxa uuna dareemayey ladaadyo iyo liidaanyo. Gabadhii timaha madoobayd oo laga iibiyey sawirkeedii hore toos buu u daawaday, laakiin wajigeedii saxda ahaa indhaha ayuu u dhammayn kari waayey.
Markii uu Ciddishabeel galay guriga jirka dumarka lagu gado waxaa la addimayey salaadda duhur, weligiisna ma uu tukan oo addinka in uu maqlo ma aha ee ma uu garanayn si loo tukado. Cimrigiisa sidaas u dheer in uu wax necbaado ma aha ee wadnihiisa wax ku ma uu jeclaan. Intii uusan guriga dumarka gelin waxa uu hilib geel ka cunay makhaayad dabaqa ku qabsanayd. Markii uu debedda uga baxay gurigii jacaylka waxa uu dareemayey in uu matag hayo. Waxa uu go’aansaday in uu qaad cuno si ay dhibta haysaa uga yaraato. Gabadhii sawirkeedii baa maskaxdiisa ku rafanaya, waxa uuna fariistay meel lagu qayilo.
Qaadka uu Ciddishabeel daaqay daalkii iyo tabar darradii xal buu u noqday, laakiin sheekada marfishka maskaxdiisu ku ma ay xirmi karin oo gabadhii uu jeclaaday baa madaxiisa buuxisey. Galabtii ilaa fiidkii qaad buu cunayey, habeenkiina hurdo waa uu iska waayey oo waxa uu waagii baryey isaga oo aan il isu geyn. Aroortii cunto loo keenay in uu cuno niyad u ma uu hayn, waxa uuna aad u jeclaa gabadhii timaha dhuxusha ah lahayd ee jirkeeda la iibinayey.
Saddex maalmood buusan wax aan qaad ahayn cunin, waxa uuna jeclaa in uu dib u arko gabadhii. Isaga oo aan tabar weyn hayn buu maalintii afraad ku soo laabtay dabaqii dumarka lagu gadayey. Waxa uu baarbaaray buuggii sawirrada, ka mana uu helin sawirkii uu jeclaa. Haweeneydii makhalka joogtey buu weydiiyey gabadhii uu maalmo ka hor la kulmay, waxa ayna u sheegtay in aysan xusuusan gabadha uu ka hadlayo. Waxa ay u sheegtay in laga yaabo in loo beddeley magaalo kale ama guri kale oo dumarka lagu iibiyo. Waxa kale oo ay u sheegtay in gabadhii la beddelo markiiba sawirkeeda laga saaro buugga.
Ciddishabeel markii intaas loo sheegay buu saljugle gadaal ugu dhacay kursi ka la jiidan oo miiska dheer dhankiisa dherernaa. Waxa uu go’aan buuxa ku gaarey haddii uu helo fursad uu meesha kaga kaco in uu sun cuno. Waxa uu dareemayey haddii gabadhii uu jeclaa sawirkeedii buugga laga waayey in aysan noloshiisu wax qiime ah lahayn. Waxa uu ogaa in uu jacaylkiisu xadka ka baxay iyo in sunta lagu dhinto oo uu isticmaali doonaa ay tahay midda dugaagga loo mariyo bakhtiga xoolaha. Maskaxdiisa waxaa isku hardiyey sawirkii uu jirrada ka qaaday iyo sunta uu cuni doono, wadnaha ayaana aad u garaacayey.
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 19th March 2018